Ama-Raspberry Pi Terminal Commands
Okusha & Okulandelayo Ukusajingijolo Pi
20 Amaphilisi okusajingijolo ase Handyberry Handy For Commanders
by URichard Saville
Hlanganisa nesipheli usebenzisa le miyalo ephathekayo
Into engangiyilwela kakhulu lapho ngisaqala ukusebenzisa i-Raspberry Pi yayiyi-terminal.
Ngivela ekubeni ngumsebenzisi we-Windows GUI ojabule kusikrini esimnyama esimnyama nesiluhlaza esingenayo izinkinobho nanoma yini okuchofoza kabili. Izinto ezesabekayo uma usebenzisa i-GUI kusukela ku-PC yakho yokuqala.
Lezi zinsuku ngizijwayele kakhulu ukuphela, ngizisebenzisa kakhulu amaprojekthi ami aseRipropberry Pi ngendlela eyodwa. Ngithole amaqhinga amancane nemiyalo encane ngendlela eyangisiza ukuba ngithole lokhu kuqiniseka, futhi ngibelana nalaba ukukusiza ukuthi uqale nge-Pi.
Ayikho into ehamba phambili noma ehamba phambili lapha - imilayezo eyisisekelo yansuku zonke eyokusiza ukuthi uhambe futhi wenze imisebenzi elula nge-Raspberry Pi yakho kusuka ewindini lokugcina. Ngokuhamba kwesikhathi uzothola okuningi, kepha lokhu kuyisisekelo esihle esabekwe ukuze usikhiphe.
[sudo apt-get update] - Buyekeza uhlu lwephakheji
Umyalo wokuvuselela uqinisekisa ukuthi uhlu lwakho lwephakheji lukhona manje. Isithombe: uRichard Saville
Lesi yisigaba sokuqala sokubuyekeza i-Raspberry Pi yakho (bona izinto ezimbili ezilandelayo kulolu hlu kwezinye izinyathelo).
I-sudo ifinyelela-thola ukubuyekezwa 'kwezinhlu zokulandwa komyalo wezinketho ezivela kumafolda futhi uthatha ulwazi olushintshe izinguqulo ezintsha kulezi amaphakheji nanoma yimuphi umuntu othembekile.
Ngakho akukwenzi ngempela ukubuyekezwa kwangempela ngomqondo wendabuko, kungaphezulu kwesinyathelo esidingekayo kuleyo nqubo jikelele.
[sudo apt-get upgrade] - Landa futhi ufake amaPhakheji abuyekeziwe
Ukuthuthukiswa komyalo wokulayisha bese ufaka amaphakheji wokubuyekeza. Isithombe: uRichard Saville
Lo myalo ulandela kusukela entweni yangaphambilini lapho sibuyekeze uhlu lwethu lwephakethe.
Ngolunye uhlu lwethu lwephakeji olusha olusha, umyalo 'we- sout apt-get upgrade ' uzobuka ukuthi yiziphi amaphakheji okwamanje afakiwe, bese ubheka uhlu lwamaphakheji lwakamuva (olusanda kuthuthukiswa), bese ekugcineni ufake noma yiziphi amaphakheji amasha angenayo ' t ngenguqulo yakamuva.
[sudo apt-get clean] - Hlela Amafayela Wephakheji Elidala
Umyalo ohlanzekile ususa ukulandwa kwephakheji yakudala, okusindise isikhala sokugcina. Isithombe: uRichard Saville
Isigaba sokugcina esimisweni sokuvuselela nokuthuthukiswa, kanti esinye esingeke ngaso sonke isikhathi sibalulekile uma une-disk isikhala esiningi.
Umyalo ' sudo uthole-uhlanzekile ' umyalo ususa amafayela wephakheji evulekile (amafayela we-.deb) alandiwe njengengxenye yenqubo yokuvuselela.
Umyalo ophephile uma unomphelo esikhala noma ufuna nje ukuhlanza kahle.
[sudo raspi-config] - I-Raspberry Pi Ukulungiselela Ithuluzi
Ithuluzi lokulungiselela i-Raspberry Pi. Isithombe: uRichard Saville
Lokhu kufanele kube yinye yezinyathelo zokuqala ozithathile lapho uqala ukusebenzisa i-Pijibilberry Pi, ukuze uqiniseke ukuthi isethelwe ulimi lwakho, i-hardware, namaphrojekthi.
Ithuluzi lokumisa lifana nefasitela 'yezilungiselelo', okukuvumela ukuba usethe izilimi, isikhathi / idethi, unike amandla ikhamera yekhamera, idlule inqubo yeprojekthi, inike amandla amadivaysi, ushintshe amaphasiwedi kanye nezinye izinketho.
Ungafinyelela lokhu ngokuthayipha ' sudo raspi-config ' bese ushaya ukungena. Kuye ngokuthi yini oyishintshayo, ungase utshelwe ukuthi uqale kabusha i-Pi yakho kamuva.
[ls] - Uhla Uhlu Lokuqukethwe
Umyalo we- 'ls' uzobhala uhlu lwemibhalo. Isithombe: uRichard Saville
Ku-Linux 'isiqondisi' sifana 'nefolda' ku-Windows. Yilokho okudingeka ngilisebenzise (ngokuba ngumuntu we-Windows) ukuze ngifune ukukhomba lokho phambili.
Kukhona, akunjalo, akekho umhloli wezinto ezibulalayo, ngakho-ke ukuze ubone ukuthi ungaphakathi kwesiqondisi okhona kunoma yisiphi isikhathi esithile, vele uthayiphe ku- ' ls ' bese ufaka ukungena.
Uzobona zonke ifayela kanye nesiqondisi ngaphakathi kwalolu hlobo lwemibhalo oluhlwiniwe, futhi ngokuvamile lufakwe umbala wezinto ezihlukile.
[cd] - Shintsha Izincwajana
Sebenzisa 'cd' ukushintsha izinkomba. Isithombe: uRichard Saville
Uma ufuna ukungena emkhokheni othile, ungasebenzisa umyalo ' cd '.
Uma ngabe isiqondisi usuvele unamakholi angaphakathi kuwo, ungamane usebenzise 'i- cd namename ' (esikhundleni 'igama lomhlahlandlela' negama lencwadi yakho).
Uma kungenye indawo efonini yakho yefayela, vele ungene endleleni emva komyalo, njenge ' cd / home / pi / isiqondisi somlando '.
Okunye ukusetshenziswa okunamandla kwalo myalo kungu- ' cd .. ' okukubuyisela emuva kwezinga elilodwa lefolda, okufana nekhamera 'emuva'.
[mkdir] - Yakha Uhlu
Dala izinkomba ezintsha nge 'mkdir'. Isithombe: uRichard Saville
Uma udinga ukwakha isiqondisi esisha ngaphakathi kwalowo osevele usukhona, ungasebenzisa umyalo we- ' mkdir '. Lena yifani 'elisha> ifolda' yezwe eligcina.
Ukuze wenze isiqondisi esisha, udinga nje ukwengeza igama lwemibhalo emva komyalo, njenge ' mkdir new_directory '.
[rmdir] - Susa incwadi
Susa izinkomba nge 'rmdir'. Isithombe: uRichard Saville
Ufunde ukudala isiqondisi esisha, kodwa kuthiwani uma ufuna ukususa eyodwa?
Umyalo ofanayo kakhulu ukususa isiqondisi, sebenzisa ' rmdir ' kuphela igama lomqondisi.
Isibonelo ' rmdir directory_name ' kuzosusa isiqondisi 'isiqondisi_mibhalo'. Kumele uqaphele ukuthi isiqondisi kumele sibe yize ukuze wenze lo myalo.
[vv] - Hambisa ifayela
Hambisa amafayela ngomyalo 'mv'. Isithombe: uRichard Saville
Ukuhambisa amafayela phakathi kwerekhodi kufezwa ngokusebenzisa umyalo ' mv '.
Ukuhambisa ifayela, sisebenzisa ' mv ' elandelwa igama lefayela bese isiqondisi sendawo.
Isibonelo salokhu kuzoba ' mv my_file.txt / home / pi / destination_directory ', okuzohambisa ifayela elithi ' my_file.txt ' ku- ' / home / pi / destination_directory '.
[isihlahla -d] - Bonisa Umuthi Wama-Directories
Isihlahla siyindlela evulekile yokubuka isakhiwo sezinkomba zakho. Isithombe: uRichard Saville
Ngemuva kokudala amarekhodi ambalwa amasha, ungase ulahlekelwe isakhiwo sefolda esibukwayo se-Windows Explorer ifayela. Ngaphandle kokubona ukuhlelwa kokubukwa kwezinkampani zakho, izinto zingahle zidideke ngokushesha.
Umyalo owodwa ongasiza ukuwenza umqondo ozwakalayo wezinkampani zakho " umuthi -d ". Ikhombisa zonke izinkomba zakho ezikulolu hlobo olufana nomuthi ngaphakathi kokuphela.
[pwd] - Bonisa i-Directory yamanje
Ukusebenzisa i- 'pwd' kungakusiza uma uqala ukuzwa ulahlekile !. Isithombe: uRichard Saville
Omunye umyalo owusizo wokukusiza uma ulahlekile ngumyalo we- ' pwd '. Lokhu kuyasiza uma ufuna nje ukwazi ukuthi ukuphi lapho kunesiphi isikhathi esithile.
Vele ufake ' pwd ' nganoma isiphi isikhathi ukuze ubonise indlela yokuqondisa yamanje ongena kuyo.
[ecacile] - Ukusula i Window Terminal
Susa i-clutter yeskrini ngomyalo 'ocacile'. Isithombe: uRichard Saville
Njengoba uqala ukuthola i-Hang ye-terminal, uzoqaphela ukuthi ingathola iminyene. Ngemuva kwemiyalo embalwa, ushiya umzila wombhalo esikrinini okungathi abanye bethu bangabacasula.
Uma ufuna ukusula isihenqo sihlanzekile, sebenzisa nje umyalo ' ocacile '. Isikrini sizosulwa, silungele umyalo olandelayo.
[sudo halt] - Shutha phansi i-Raspberry Pi yakho
Gwema i-Raspberry yakho Pi ngokuphepha ngomyalo 'wokuma'. Isithombe: uRichard Saville
Ukuvala i-Raspberry yakho Pi ngokuphepha igwema izinkinga ezifana nenkohlakalo yekhadi le-SD. Ungase uhambe ngokudonsa okusheshayo kwenkambo yamandla ngezinye izikhathi, kodwa, ekugcineni, uzobulala ikhadi lakho.
Ukuvala kahle i-pi, sebenzisa i- ' sudo stop '. Ngemuva kokukhanya kokugcina okuvela kuma-LED we-Pi, ungakwazi ukususa ikhebula lamandla.
[sudo kabusha] - Qala kabusha i-Raspberry Pi yakho
Qala kabusha i-Pi yakho usebenzisa i- 'reboot' esiphethweni. Isithombe: uRichard Saville
Ngokufanayo nomyalo wokuvala, uma ufuna ukuqala kabusha i-Raspberry Pi yakho ngendlela ephephile, ungasebenzisa umyalo ' wokuqalisa kabusha '.
Vele uthayiphe ' sudo kabusha ' futhi i-Pi yakho izoqala kabusha.
[startx] - Qala i-Desktop Environment (LXDE)
Qala iseshini yedeskithophu usebenzisa i- 'startx'. Isithombe: uRichard Saville
Uma usethe i-Pi yakho ukuthi ihlale iqala esibulalayo, ungase uzibuze ukuthi ungaqala kanjani ideskithophu uma udinga ukuyisebenzisa.
Sebenzisa i- ' startx ' ukuqala i-LXDE (i-Lightweight X11 Desktop Environment). Kumele kuqashelwe ukuthi lokhu ngeke kusebenze ngeseshini ye-SSH.
[ifconfig] - Thola ikheli lakho le-IP likaRaspberry Pi
i-ifconfig ingakunika imininingwane enethiwekhi ewusizo. Isithombe: uRichard Saville
Kunezimo eziningi ezingase zidinge ukuthi wazi ikheli le-IP le-Raspberry Pi yakho. Ngiyisebenzisa kakhulu uma ngilungiselela iseshini ye-SSH ukuze ngifike kude nePi yami.
Ukuze uthole ikheli lakho le-IP, thayipha ' ifconfig ' ku-terminal bese ucindezela ukungena. Ungasebenzisa futhi ' igama lomphathi -I ' ukuthola ikheli le-IP kuphela.
[nano] - Hlela ifayela
Umhleli wami wombhalo okhethekayo we-Raspberry Pi uyisibonelo. Isithombe: uRichard Saville
I-Linux inezinombolo ezahlukene zabahleli bombhalo, futhi uzothola ukuthi abanye abantu bakhetha ukusebenzisa omunye komunye ngezizathu ezihlukahlukene.
Okuthandwa ngu- ' nano ' ikakhulukazi ngoba kungowokuqala engikusebenzise lapho ngiqala ukuphuma.
Ukuze uhlele ifayela, mane uthayiphe ' nano ' elandelwa igama lefayela, njenge ' nano myfile.txt '. Uma ukuhlelwa kwakho kuqedile, cindezela i-Ctrl + X ukuze ulondoloze ifayela.
[cat] - Ibonisa Okuqukethwe kwefayela
Bonisa okuqukethwe kwefayela kulesi sibulali usebenzisa 'ikati'. Isithombe: uRichard Saville
Noma ungasebenzisa i- 'nano' (ngenhla) ukuvula ifayela lokuhlela, kunomyalo ohlukile ongayisebenzisa ukuvele ulandele okuqukethwe kwefayela ngaphakathi kokuphela.
Sebenzisa ' ikati ' elandelwa igama lefayela ukwenza lokhu, isibonelo ' cat myfile.txt '.
[rm] - Susa ifayela
Susa amafayela kalula usebenzisa i- 'rm'. Isithombe: uRichard Saville
Ukukhipha amafayela kulula ku-Raspberry Pi, futhi kuyinto ozoyenza okuningi njengoba wenza izinguqulo eziningi zamafayela we-Python ngenkathi uthola ikhodi yezinkinga.
Ukuze ususe ifayela, sisebenzisa umyalo we- ' rm ' olandelwa igama lokufaka igama. Isibonelo sibe ' rm myfile.txt '.
[cp] - Kopisha ifayela noma yirekhodi
Kopisha amafayela usebenzisa 'cp'. Isithombe: uRichard Saville
Uma udinga ukwenza ikhophi yefayela noma isiqondisi, sebenzisa umyalo ' cp '.
Ukwenza ikhophi yefayela lakho kumhlahlandlela ofanayo, faka umyalo njenge ' cp original_file entsha_file '
Ukuze wenze ikhophi kuhlu lwemibhalo ehlukile, ngegama elifanayo, faka umyalo njenge ' cp original_file home / pi / subdirectory '
Ukukopisha yonke isiqondisi (kanye nokuqukethwe kwayo), faka umyalo njenge ' cp -R home / pi / ifolda_yodwa ekhaya / pi / ifolda_two '. Lokhu kuzokopisha 'folda_one' ibe 'folder_two'.
Kuningi Okufanele Ufunde Nokho
Le miyalo engu-20 izokusiza ukuthi uqalise nge-Raspberry Pi yakho yokuvuselela isofthiwe, ukuqondisa izinkomba, ukudala amafayela futhi ngokuvamile usebenza ngendlela yakho. Ngokuqinisekile ngeke uthuthuke kulolu hlu oluqala uma uthola ukuzethemba, qalisa ukwakha amaphrojekthi futhi udale isidingo sokufunda imiyalo eyithuthukisiwe.
Khanyisa i-LED nge-GPIO yama Raspberry Pi
Finyelela i-Raspberry Pi yakho kusuka ku-PC yakho nge-SSH
Indlela Yokusetha I-Adapter ye-WiFi ye-USB ene-Raspberry Pi
Izindlela 10 Zokususa I-Raspberry Pi yakho
Ukuvakasha kwe-Raspberry Pi GPIO
Sawubona Umhlaba - Iprojekthi Yakho Ye-Raspberry Pi Yokuqala
I-Windows Essential Free Yama-Windows Software for Abanikazi be-Raspberry Pi
Ngumuphi umsila we-Raspberry Pi Ikhamera okufanele uyithenge?
Umhlahlandlela Wokufinyelela I-akhawunti Ye-Mail Mail ku-iPhone Mail
Izinhlelo zokusebenza eziphezulu ze-Movie neVidiyo ze-Smartphones
I-Franchise Entsha Engcono Kakhulu Ye-PS4 Generation
Umehluko Phakathi kuka 720p, 1080i, 1080p, ama-HDTV angu-4K
I-Tube Yokuvulela I-Vacuum - I-Past Past Ihambisana Namuhla
Indlela Yokuguqula Isithombe Sokufometha kwe-GIF
Indlela Yokunqamula Isithombe Semuva Ukuze Ufake Ikhasi LeWebhu
Indlela yokusebenzisa amathrekhi kumageyimu usebenzisa i-Wii Homebrew
Amathiphu Okubalulekile Wokukhetha Umvikeli Ophuthumayo We-Electronics
Ukusetshenziswa kwamalebula ku-Excel nama-Google AmaSpredishithi
Amathuluzi 4 Okukusiza Ukuqalisa Izinhlelo ZamaWindows Ku-Linux
Ukubambisana Kwamabhizinisi Kungaba Ukuhlanzeka Kwebhizinisi Lakho Lokubamba Ibhulogi
Indlela Yokushintsha Ikhasi Lakho Lasekhaya ku-Internet Explorer 7
I-Samsung KS9500 4K TV Series
Ukusethwa kwe-Google Chromecast: Indlela Yokuqala Ukubuka Ngokushesha
Ungalanda kanjani amavidiyo we-Twitch VOD
Indlela Yokuvuselela Ithebulethi Yakho Yomlilo Yomlilo
Ukusebenzisa izitayela ze-Graphic ku-Illustrator (Ingxenye 2)
Funda ukukhubaza ukuqala kabusha kwe-Automatic ku-Windows XP
I-10 Best Mashups kuwebhu